Baarlamaanka oo Maanta la horgaynayo Warbixintii Qalbidhagax iyo Mooshino iska soo horjeeda. – Hornafrik Media Network
Baarlamaanka Somalia ayaa yeelanaya mid ka mida Kulamadii ugu adkaa ee muddooyinkan uu yeesho, iyadoo loo madlan yahay in laga dhagaysto Warbixin Guddigii loo xilsaaray arrinta Qalbidhagax.
Dadaalo la doonayo in Kulankaasi uusan qabsoomin ayaa xalay ka soconayay Magaaladda Muqdisho, iyadoo Xildhibaano badan oo Baarlamaanka ka tirsan lagu tashkiilanayay inaysan tagin fadhiga Baarlamaaka ee bari si uu Shirku ugu baaqdo Kooram La’aan. Waxaana abaabulkan wada Xildhibaano ku aragti ah Xukuumadda Somalia.
Sidoo kale waxaa jira Qorshe kale oo haddii Kulanka Baarlamaanku qabsoomo laga horgaynayo Warbixinta Guddiga, taasoo ah in Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somalia inay gudbiyaan Mooshin ka dhan ah Gudoomiyaha Baarlamaanka, Maxamad Cismaan Jawaari, kadibna waxay ku doodi doonaan inuusan guddoomin karin Shirka Maadaama Mooshin laga keenay, taasoo iyadana ay ka dhalan doonto Buuq Xooggan.
Si Kastaba ha ahaatee Baarlamaanka Somalia oo aan la sii saadaalin karin waxa ka dhex dhici kara ayaa la isku waafaqsan yahay inuu yeelan doono Mid ka mida Kulamadiisii ugu adkaa, kaasoo ay dhici karto inuu isku badalo Fowdo iyo Buuq, ama inuusan qabsoomin oo uu u baaqdo Kooram La’aan